ကြက်ဥပြုတ် မှတ်စုထုတ် egg | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကြက်ဥပြုတ် မှတ်စုထုတ် egg
ကြက်ဥပြုတ် မှတ်စုထုတ် egg
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Apr 8, 2013 in Community & Society, Food, Drink & Recipes | 28 comments
ခက်တယ်ဗျာ ရွာသားတွေက အပြောမိုးလောက်၊ လက်တွေ့ပြပါဆိုရင် မြေကြီးအောက်မှာများတယ်။ (ဥပမာ – ဦးကျောက်ခဲ) သဂျီးကအစ ထေရဝါဒကို သာသနာ မောင်ပိုင်စီးတယ် စွပ်စွဲနေတာ သူကြတော့ တိုင်းပြည်ဂျီးကို ရှေးရိုးစွဲလက်က ကယ်မလို့တဲ့၊ သူများမျက်ချေးသာမြင်၊ ကိုယ့်မျက်ချေးတော့ မမြင်၊ ဒွတ်ခ..။ အပြောရွှေမန်း ရေးတာများ အီးဇီးကွတ်၊ ဘီးဇီးကွတ် ရွှန်းရွှန်းဝေလို့.. အန်တီမမ၊ အန်တီဝေတို့ ပြောပါတယ်။ တချို့ကြတော့ စီမံခန့်ခွဲရေးဂုရုယောင်ယောင် အိုင်တီဆရာယောင်ယောင် သူတို့မရှိရင် ကမ္ဘာပျက်လုမတတ်.. သိချင်လား – မောင်ဂီ။ မူးလာရင် ပိဋကတ်သုံးပုံ တတ်ယောင်ကားလုပ်တဲ့ ပိဋကတ် အိုးခြမ်းပဲ့လည်းရှိသေး၊ ဘယ်သူရှိမတုံး – ဂျော်နီအောင်ပု…။ စင်ကာပူရ ဆွိမမ ရေးလိုက်တာများ မြန်မာတပြည်လုံး မစားဘူးတဲ့ဆိုင် မရှိတဲ့အတိုင်း…။ အင်္ဂလန်သူ လာဘ်အရီးဆို ဘွားဒေါ်ထိရင် မိုးပေါ်က သိကြားမင်းတောင် နို့ဆီလောက်မချို အော်တော့တာပဲ။ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးကတော့ ယူအက်စ်နဲ့ အီးယူကိုတောင် အကြွေးသိမ်းမတဲ့..။ ပေါဘကွာ… :harr:
ခင်ဗျားတို့ တကယ်ဟုတ်ရင် ကြက်ဥတလုံးပဲ ဖြစ်မြောက်အောင် ပြုတ်စမ်းပါ။ လူဆယ်ယောက် ပုံစံဆယ်မျိုး ထွက်လာမယ်။ ဒါလားကွ… တတ်သိပညာရှင်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ… သောက်ခွီး..။ :eee: ပြုတ်တဲ့အခါ အများအားဖြင့် ရေဆူဆူ မိနစ်၂၀လောက် ပစ်ထားတတ်တယ်။ အဲလိုလုပ်လို့ ပွဲမတိုးတဲ့ ကြက်ဥပြုတ်တွေ ဖြစ်ကုန်တာ..။
ဥပြုတ်နည်း နိသရည်းအစစ်က ဒီလိုဗျ..။ ပြုတ်တဲ့အခါ အကျက်မညီတဲ့ အဖြူရောင်အကာနဲ့ အဝါရောင်အနှစ် နှစ်လွှာရှိတယ်။ မီးပြင်းပြင်း ဆက်တိုက် အပူပေးရင် အကာမှာရှိတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် မာသွားပြီး ဥတဝိုက်နားမှာ စိမ်းပုပ်ပုပ်ဖြစ်လို့ စားမကောင်းတော့ဘူး။ (တတ်သလောက် ဘာသာပျံတာဗျာ၊ မှားသွားရင် စောဒီး) ပြုတ်တာ အချိန်နဲပြန်တော့ အကာနူးညံ့ပါရဲ့ အနှစ်ပျစ်ချွဲချဲ ဖြစ်သွားတယ်..။ သိပ်ပွက်ပွက်ဆူအောင် အပူပေးတဲ့အခါ ဥခွံ အက်ကုန်ရော..။
ကြက်ဥ နတ်ပြု ဓာတ်ဖု သက်စု..
အကောင်းပတိရအောင် ဂရုစိုက်ပြုတ်ပါ။ အိုးထဲ ဥတွေပြွတ်သိပ်နေအောင် မထဲ့နဲ့၊ လိုအပ်ရင် နှစ်ခါခွဲပြုတ်သင့် ပြုတ်ရမယ်။ ရေအေး အရင်စိမ်ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းခြင်း အပူပေး၊ ရေပလုံစီဖောင်းတွေ တက်လာရင် မီးအပူရပ်၊ ဆယ်မိနစ်လောက် အဖုံးလုံလုံပိတ်၊ အပူကုန်သွားအောင် ရေအေးပြန်ပေး။ ဒါဆို ရှယ်ဥပြုတ်ရပြီ။ မယုံ တလုံး စမ်းပြုတ်ကြည့်ဗျာ၊ လုံးကြီးပေါက်လှ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး (ရေဆေးငါးဂျီးလို) စားချင်စဖွယ် ရွှေရောင် ကြက်ဥပြုတ်က ခင်ဗျားနှလုံး ပီတိဖုံးသွားစေမယ်။
ငတ်၍မဟုတ် တတ်၍ပြုတ်သော စားတော်ကဲချုပ် မီညောင်ခွီးဂရား ဦးကြောင်ကြီး
By Sarah B. Weir, Yahoo! blogger | Team Mom –
Also on Yahoo: Eggstra, Eggstra! Here’s How and Where to Buy Eggs
သူ့ နည်းနဲ့ စမ်းပြုတ်ကြည့်ဦးမှာပဲ။
ကြက်ဥပြုတ်တောင် ဆရာကြောင်မပြရင် နည်းမကျတဲ့ ဘဝရောက်ပြီ။
ဟုတ် .. ကျေးဇူးပါအူးကြောင်
ခုတော့သိပြီ .. အလုံးလိုက်ပြုတ်ရတာကိုး
(သများကတော့ အနှစ်ကိုကြက်အောင်ပြုတ်ရင်မကြိုက်ဘူး မဲသွားရင်တော့ မစားတော့ဘူး) ;)
သြော် .. ကျန်ခဲ့လို့
ကြက်ဥအကွဲတွေကို ပြုတ်မယ်ဆိုရင် အထဲကအကာတွေ အပြင်စိမ့်မထွက်အောင် ရေထဲကို ဆားထည့်ပြုတ်ရတယ်တဲ့ ..
ဒါများ အီးဇီးပါ ..
ကြက်ဥကို ရေမြုပ်အောင်ထည့် … မီးအေးအေး (၀ပ်တစ်ထောင်)နဲ့ ၁၀ မိနစ် တိုင်မာ ပေးလိုက်ရင်ရပြီ ..
အနှစ်ပျော့ပျော့စားချင်ရင် ၅ မိနစ် …
အဲဒီထက် ပိုအီးဇီးတဲ့ အစာသွတ်ထမင်းချက်ချင်ရင်တော့ ကြက်ဥကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီး ထမင်းချက်နေတုန်း တစ်ခါထဲသာ ထည့်ချက်လိုက် .. ထမင်းလဲကျက် ကြက်ဥလဲကျက် …
ကျုပ်က အိမ်သာကျင်းတူးတာ ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့…
ဂိုဏ်းတူချင်း ဖဲ့ တာ… နာသဗျာ….
ကြက်ဥပြုတ်နည်းလေး ဆရာပြလို့ နည်းကျသွားပီဆိုတော့
ငါးပိ ဖုတ်နည်းလေးပါ မှတ်စုထုတ်ပေးပါ ဦးဦးကြောင်ရှင့်…
အူးကြောင် တော်လိုက်ဒါအေ ..
အနော် .. ကြက်ဥ မပြုတ်တတ်ဘူး .. တကယ် … တကယ် …. အကာကြတ်ဆိုလျှင် တလုံးလုံး ကြတ်ချင်ကြတ် … မကြတ်လျှင် အစိမ်းတိုင်းဖြတ်တတ်ပြီး …. အကြတ်ပြုတ်ဆိုလဲ .. ဘဲချီး .. ကြက်ချီးစော်နံအောင် … ဥကွဲတဲ့အထိ …. ပြုတ်မိပါဒယ် …. ။ ဘယ်လို သင်သင် မတတ်တာ … အိုက် ပြင်ညာပဲ ….
ကြက်ဥပြုတ်ကနဲနဲရယ်။ ရွာထဲ ထန်းရည်များမူးသွားသလားလို့။ ဇဂါးမစပ် အဲလို ပလုံစီတက်လာရင် ပလုံစီ ၁၀၀ ပြည့်ရင် မီးပိတ်လိုက်လို့ကြားဖူးတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုရီရမလဲအောင်ကျူးဂျီး။ အကြံလေးများမစပါ။
ကြောင်က ကြက်ဥပြုတ် ကြိုက်သတဲ့လား အံ့ရော အံ့ရော
ဆရာ မပြ နည်းမကျတဲ့ ..
ဦးကြောင်ပြမှ အရောင်လှတော့ပေမပေါ့ (ကြက်ဥလေးက) :hee:
ငတ်၍မဟုတ် တတ်၍ပြုတ်သော စားတော်ကဲချုပ်ကြီးပါလား
ရွာထဲက ချိကွတ်တွေ လာကြ
အဲ သူနဲ့တော့ ပေတစ်ရာ ကွာပစေ
သတ် သူ့ မုတ်
အဲ ဘာ ဖြစ်သွားပြီလဲဟ
ကြက်ဥပြုတ်ကို ဘီးဇီးကွတ်နည်းနဲ့ ကွတ်ပြမယ်။ :harr:
၁။ ကြက်ဥများကို ရေစင်အောင်ဆေးပါ။
၂။ ရေဆေးစဉ် လွတ်ကျပြီး မကွဲအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
၃။ ကြက်ဥတစ်လုံးချင်း ယူပြီး အိုးထဲသို့ ထည့်ပါ။
၄။ ရေကို ကြက်ဥမြှုပ်သည်ထိ ဖြည့်ပါ။
၅။ ရေဖြည့်ထားသော ကြက်ဥအိုးကို မီးဖိုပေါ်တင်ပါ။
၆။ မီး မပြင်း မပျော့ အနေအထားမှာ ထားပါ။
၈။ ကြက်ဥ ကျက် မကျက်သိလိုလျှင် ကြက်ဥတစ်လုံးယူ၍ခွဲကြည့်ပါ။
၉။ အနေတော်လျှင် အိုးချပါ။
၁၀။ အနေမတော်သေးလျှင် ခေတ္တဆက်၍ တည်ပါ။
၁၁။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလျှင် ကြက်ဥတစ်လုံး ဆယ်ယူ၍ ခွဲကြည့်ပါ။
၁၂။ အနေတော်လျှင် အိုးချပါ။
၁၃။ အနေမတော်သေးလျှင် ဆက်တည်ပါ။
၁၄။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလျှင် ကြက်ဥတစ်လုံး ဆယ်ယူ၍ ခွဲကြည့်ပါ။
ဤနည်းဖြင့် ကြက်ဥ၁၀လုံးပြုတ်လျှင် အမာအပျော့ ပုံစံစုံ၁၀မျိုးနှင့် အမရာကြက်ဥပြုတ် ကို ရမည်။
ဤကာ ဘီးဇီးကွတ် အလိုတည်း။ :harr:
အော်ပီကျယ်၏ ရေသောက်နည်း၊ အကျီ င်္ဝတ်နည်း၊ ငှက်ပျောသီးခွာနည်း သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ်ရ
အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် ကြက်ဥချဉ်ရည်ဟင်းကို ခရေဇီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဦးကြောင်ပြောတဲ့ ကြက်ဥပြုတ်နည်းကို သင်ပေးဖူးတယ်။
ကြက်ဥပြုတ်တာများ လွယ်လွန်းလို့ ရေထဲထည့်ပြုတ် ပြီးတာပဲဆိုပြီး ကန့်လန့်တိုက်ခဲ့တာ …
အဲဒီသူငယ်ချင်းက ခုချိန်ထိ လူစုံရင် ကြက်ဥတောင် မပြုတ်တတ်ဘူးလို့ ဒေါက်ဖြုတ်မြဲ။ :eee:
ကျုပ်ကတော့ ကြက်ဥ မပြုတ်တတ်ဘူး ….။ စားတော့စားတတ်တယ်….။ အူးကြောင် ပြုတ်ပြထားတဲ့ကြက်ဥပြုတ် အခြမ်းလေးတွေကို ပဲဆီ သန့်သန့်လေးမှာ စိမ် အနှစ်သားလေးပေါ် ဆားလေးနဲနဲဖြူးပြီး မနက်စောစော ထမင်းပူပူ လေးနဲ့လွေးလိုက်ရလို့ကတော့ ဟင်းးးးးး
ဗိုက်လေးပြီး တစ်ရေး ပြန်အိပ်ချင်စိတ်ပေါ်သွားတယ်………။
ဒါလား .. ဒက်ဒီ မှတ်စု ….။
ဒက်ဒီ ကြွတဲ့အခါ ဒီမှတ်စု စာအုပ်ကို
အကြောင်းပြုလို့ ကျုပ် စာတစ်ပုဒ် ရေးဦးမယ် ….
( အပြောမိုးလောက်၊ လက်တွေ့ပြပါဆိုရင် မြေကြီးအောက်မှာများတယ် )
ကောင်းကင်ကြီးကို မျက်နှာမူပြီး တံတွေးထွေးတော့ ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်ဘဲ တံတွေးပြန်ကျလာမှာပေါ့
ကြက်ဥဆိုတာ ကြက်မဆီက လာတယ်လို့ သိဘို့လိုပါလိမ့်မယ်
ဒါ့ကြောင့် ကြက် တွေကို ဘယ်လိုမွေးမြူထိမ်းသိမ်းရသလဲဆိုတာကိုသိဘို့လိုကြပါလိမ့်မယ်
ပိဋကတ် ထဲမှာ ပါဒမျှ
ရေးပြဘာအုံးလား ချာပုရဲ့ ….
ကြက်အကြောင်းဆို ဆိတ်ဝင်စားရို့ ….
ကျုပ်က ရွာဒါးဆိုဒေါ့ ကြက်အကျောင်း ဆိတ်ဝင်စားဒါ မစန်းဘာဘူးနော့ …
ကြက် အကြောင်းသိလိုသူများအောက်ပါလင့်သို့ ဝင်ကြည့်ပါရန်
ဒန် တန့်ဒန်
အဲဒါ.. ခရစ်တော်ပျံလွန်တဲ့ အီစတာမှာ..(ကြက်ဥနေ့)ရာဟူးဝက်ဆိုက်တင်ပြီး.. ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်သွားတာကြီးပေါ့..။
ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေများ.. ကြက်ဥနဲ့ကြက်မဘယ်ကအရင်ဆိုတာတောင်.. သိကြတာမဟုတ်…
ယေရှုခရစ်တော်က သေဘူး၊ ရှင်သန်ထမြောက်သွားတယ်… လစ်ဘရယ်သဂျီးဇုတ် သိလည်းသိပဲနဲ့ နားမလည်ပါးမလည် စော်စော်ကားကား လျောက်ပေါရလား… :om:
ကျုပ်က.. ဂျပန်မှာနေတုံး.. ၀ိုင်သောက်ချင်လို့.. ချပ်ခ်ျတက်ပြီးခရစ်ယန်အဖြစ်ခဏခဏခံယူပါတယ်ဆိုနေမှ…
စိတ်ဝင်စားလို့.. ကျောင်းသားလောက်ကတည်းက.. ဓမ္မာဟောင်းရော..သစ်ရော.. ကရင်ချခ်ျမှာဝယ်ပြီးဖတ်လာတာ..
သောကြာနေ့မှာ.. Crucifixion လုပ်ခံရတယ်..
အုဆြာ အုကြောင်ကြီးးးး …..
ကြက်အုပြုတ်ဆိုင်ဖွင့်ချားပါရားးးးး အူးကြောင်ကြက်အုပြုတ်ဆိုင်ဖွင့်စားရင် ရွာထဲမှာအားပေးမဲ့
ကြက်ဥ ကို အနှစ် အကာ သီးသန့် ရှိနေစေလို့.. အနှစ် မကျက် အကာ မကျက်.. အကျက်လွန် အကျက်လျော့.. အခွံကွဲ အဲ့လိုတွေ ဖြစ်စေတာပေါ့..
အဲ့ဒီလို ပြသနာတွေ မဖြစ်ရလေအောင်.. ကြက်ဥ ကို ယူ လိုက်ပါ..
ပန်းကန်လုံး တခု ထဲ ကို ဖောက်ထည့်မယ်..
ကြေမွအောင် ခေါက်လိုက်ပါ.. ပြီးတော့.. အိုးထဲ ကို ရေ အနည်းငယ်ထည့်ပါ..
ပန်းကန်လုံး ထဲမှာ ဖောက်ပြီး မွေ ထားတဲ့ ကြက်ဥထဲ ကို ဆား သကြား ကြိုက်သလောက် ထည့်လိုက်ပါ.. အပေါ်မှာ ငရုတ်ကောင်းလေး ဖြူးးးးးးးးးးး
ရေထည့်ထားသော အိုးထဲမှာ ပန်းကန် ထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်လိုက်ပါ.. ပန်းကန် ရေမမြုပ်အောင် ထည့်ပါ။
၁၀မိနစ်လောက် မီးမြှင်းမြှင်း နဲ့ ဆူပွက်ခိုင်းပြီး ကလောက် ကလောက် မြည်စေသော်..
ပြီးသော် အခါ.. အိုးထဲက ရေခမ်းသလောက် ရှိ.. ပန်းကန် ကို အ၀တ်လေးနဲ့ကိုင်ပြီး ထုတ်ယူ စားသုံးနိုင်ပါစေသောဝ်..
မှတ်ချက် ပန်းကန်လုံး ကို အဖုံးဖုံး ထားပါ။
အကာကျက် အနှစ်ကျက် တဲ့ ပြသနာ လုံးဝ မရှိတော့ပဲ.. အားလုံး ပေါင်းစည်းခြင်း သဘော စည်းလုံးခြင်းသဘော ညီညွတ်ခြင်း အသွင်ဆောင်ကာ.. တအိုးထဲမှာ အကာ အနှစ် ညီညီညွတ်ညွတ် ရှိကာ စိတ်ကြိုက် ဇွန်းနဲ့ ခပ်ယူ စားသုံးနိုင်ပါသည်။
အပျင်းပြေ.. ရေနွေးကြမ်းလေး နဲ့ စားနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်ထားတဲ့ ကြက်ဥပြုတ် ဒီနေ့ အလွန်စားချင်နေမိပါတော့တီ
ကြက်မနဲ့ ကြက်ဥ ဘာစဖစ်လဲ ရှင်းပေးပါ။..
ကြက်ဥပြုတ်က အဆာခံတယ်.. နှစ်လောက်လုံးစားပြီး
ရေသောက်ချထားရင် ညနေအထိ ထမင်းမဆာဘူး..